Hawaii hotels: March 2021 numbers much lower compared to first three months of 2020 | Hawaii Travel News
Home » Akụkọ Njem njem Hawaii » Iilọ nkwari akụ Hawaii: Nọmba 2021 dị ala ma e jiri ya tụnyere ọnwa atọ mbụ nke 2020
Iwu iche iche nke ndị Hawaii maka ndị njem n'ihi ọrịa COVID-19 na-ebute ọdịda dị egwu maka ụlọ ọrụ ụlọ nkwari akụ
Ego ntinye ego nke ụlọ nkwari akụ nke Hawaii na steeti niile jụrụ $ 192.4 nde na March
Na Machị 2021, klas ọnụahịa elu na ala gosipụtara uto ma e jiri ya tụnyere Machị 2020
Agunyeghi ezumike ezumike na ihe ndi ozo n'oge nyocha a
Na Machị 2021, ụlọ oriri na ọ Hawaụ Hawaụ ndị dị na Hawaii kwuru na ụdị ego ha nwetara n'otu ụlọ (RevPAR), ọnụego kwa ụbọchị (ADR), na ebe obibi ma e jiri ya tụnyere Machị 2020. Nke a bụ oge mbụ n'ime otu afọ ebe ngosipụta ndị ahụ adịghị ala. Agbanyeghị, nsonaazụ dị iche na mpaghara. Kwa afọ, ọnụ ọgụgụ nke ụlọ nkwari akụ nke steeti RevPAR, ADR, na obibi dị nnọọ ala ma e jiri ya tụnyere ọnwa atọ mbụ nke 2020 dị ka iwu iche iche nke ndị Hawaii maka ndị njem n'ihi ọrịa COVID-19 malitere na March 26, 2020, nke ozugbo rụpụtara na mbelata dị egwu maka ụlọ ọrụ nkwari akụ.
Dị ka Hawaii Hotel Performance Report bipụtara site na Hawaii Tourism Authority (HTA) Ngalaba Nchọpụta, RevPAR na steeti niile na March 2021 fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ gara aga na $ 123 (-0.3%), ADR dịtụ elu na $ 285 (+ 1.4%), na ebe obibi bụ 43.1 pasent (-0.7 pasent isi) (ọgụgụ 1) . Ihe nchoputa nke ihe nchoputa ahu weputara data nke STR, Inc., chiputara, nke n’eme otutu ihe nlere anya nke oma banyere ihe nlere di na Hawaiian Islands. Na Machị, nyocha ahụ gụnyere akụ 150 na-anọchi anya ụlọ 43,889, ma ọ bụ 82.6 pasent nke ụlọ obibi niile na 86.9 pasent nke ụlọ obibi na-arụ ọrụ nwere ọnụ ụlọ 20 ma ọ bụ karịa na Hawaiian Islands, gụnyere ọrụ zuru oke, ọrụ pere mpe, na ụlọ ezumike. Agunyeghi ezumike ezumike na ihe ndi ozo n'oge nyocha a.
Na Machị 2021, ọtụtụ ndị njem si na steeti na-ejegharị ma na-agagharị na mpaghara ga-agabiga iwu onwe onye nke ụbọchị 10 iji wepụta onwe gị iche na nyocha COVID-19 NAAT na-esite n'aka Onye Mmekọ Ule Tụkwasịrị Obi site na mmemme nchekwa njem nke steeti. . Ndị njem trans-Pacific niile na-esonye na mmemme nnwale tupu njem a chọrọ ka ha nwee nsonaazụ nnwale na-adịghị mma tupu ha apụ na Hawaii. Kauai County nọgidere na-akwụsịtụ nwa oge na nsonye ya na mmemme njem nchekwa nke steeti, na-eme ka ọ dị mkpa maka ndị njem trans-Pacific niile na Kauai ka ha kpọpụ iche mgbe ha rutere ma e wezụga ndị na-esonye na mmemme nnwale tupu na njem na "ebe a na-eme njem" ihe onwunwe dị ka ụzọ iji belata oge ha. Obodo nke Hawaii, Maui na Kalawao (Molokai) nwekwara ndi iche iche iche na ebe onwa March.
Ego ụlọ nkwari akụ nke Hawaii na-enweta na steeti dum jụrụ $ 192.4 nde (-7.1%) na Machị. Ọnụ ego ụlọ bụ 675,700 ụlọ abalị (-8.4%) na ntinye ụlọ bụ 1.6 nde ụlọ abalị (-6.8%). Ọtụtụ ụlọ akụ mechiri ma ọ bụ belata arụmọrụ bidoro na Eprel 2020. Ọ bụrụ na agbakọtara ebe obibi maka Machị 2021 dabere na mbubata ọrịa na-efe efe site na Machị 2019, ibi n'ime ya ga-abụ 14.1 pasent maka ọnwa ahụ.
Na Machị 2021, klaasị ọnụahịa elu na nke ala gosipụtara uto ma e jiri ya tụnyere Machị 2020. Njirimara Klasịs Njirimara nwetara RevPAR nke $ 297 (+ 36.4%), yana ADR dị elu na $ 776 (+ 33.6%) ma biri na 38.2 pasent (+ 0.8 pasent isi ). Midscale & Economy Class properties nwetara RevPAR nke $ 93 (+ 2.8%) na ADR na $ 193 (+ 7.5%) na obibi nke 48.2 pasent (-2.2 pasent isi).